Duqa Caasimadda Hargeysa oo ka hadlay cillad ku timi agabkii ay lacagta badan geliyeen
Home WARARKA Duqa Caasimadda Hargeysa oo ka hadlay cillad ku timi agabkii ay lacagta...
Hargeysa:(Berberanewsl)-Maayarka Caasimadda Hargeysa Md. Cabdiraxmaan Caydiid(soltelco), ayaa markii ugu horraysay ka hadlay cillad la weriyey inay ku timi agab qiimo badan ku kacay oo ay Dawladda Hoose ee Hargeysa dhawaan usoo iibsatay inuu waddooyinka dhismahooda ka caawiyo.
Maayar Soltelco oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa tilmaamay in qaybo kamid ah agabka cilladu ku timi wixii lagu cillad saari lahaa dalka yimaadeen, isla-markaana qaybta dhiman ay filayaan inay dhawaan soo gaadhi doonto, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Jaygii waanu u keydinayna, Agabkii kii oo naga maqnaana intii ugu horraysay shalay bay timi, badhna ilaa saadambe ayuu imanayaa oo waanu sugaynaa, waxana aanu sii wadnaa waddooyinkii carro-kaawada ahaa ee la dhisayey.”
Duqa Caasimaddu isaga oo ka hadlay cillada ku timi agabkii ay lacagta badan geliyeen oo muddo haatan fadhiid iska ah, ayaa waxa uu yidhi,“Shay marka aad ku bilowda adigo oo aan agabkiisu dhamaystirnayn haddii ay caqabad yari kaa hortimaaddo waa dhibaato, imika waxa naga gubtay hal daynamo, agabka yimina way ku jirtaa, waxana aanu doonaynaa agabkayaga oo noo dhamaystiran inaanu hal mar wada dhaqaaqno.”
Wershadda dhagaxaanta ridiqda ee Karasharka loo yaqaanno oo ay dhawaan dawladda hoose ee Hargeysa lacag badan kusoo iibsatay, isla markaana lagu rakibay goob ku taalla galbeedka magaalada ayaan in muddo ah shaqaynin, waxana la tebiyey inay cilladi ku timi, balse maayar Soltelco oo isagu cilladan qiray, ayaa hoosta ka xariiqay in dhawaan cilladaas oo dhinaca Daynamada ah meesha laga saari doono.
Karasharka haatan cilladu ku jirto, ayaa muhiim ah shaqada dawladda hoose ee dhinaca waddooyinka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay si gaar ah diiradda u saaraysay, waxana haatan xilligeedii la taagan waddada madaarka iyo suuq-weynaha Hargeysa isku xidha oo ay xildhibaanada golaha deegaanku ballan ku qaadeen inay bilaha soo socda dhismaheeda iyo dayactirkeeda bilaabi doonaan.
Previous articleXooga dalka Soomaaliya ma jabin karaan Alshabaab?
Next articleMadaxweynaha Somalia oo shaaciyay Shirweyne Qaran